Kuuriyada Koofureed | RayHaber | raillynews
7 oo ka socota Saldhigga Magaalada Gangneung ee Kuuriyada Woqooyi: Dadka 30 200 ayaa ku dhaawacmay shilka sababay burburka tareenka xawaaraha sare leh oo rakaabka 15 u guuraya caasimada Seoul. In kasta oo sababta shilkaasi aan la ogayn [More ...]
Koonfur iyo Waqooyiga Kuuriya Tareenada Iskuday
Tareennada Kuuriyada Koonfureed, 10 waxay ka gudbeen xadka markii ugu horeysay sanado, waxay bilaabeen inay u safraan Kuuriyada Waqooyi. Daraasiin saraakiil iyo injineerro ah oo ka imanaya South Korea tareenka 6 ayaa burburiyey wadooyinka tareenka ee Waqooyiga Kuuriya. [More ...]
Saraakiisha ka socota Waqooyiga iyo Koofurta Kuuriya ayaa kulmay si ay uga wada hadlaan shaqada khadka tareenka ee mideyn doona Jasiiradda Kuuriya ee kala qeybisa. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in [More ...]
Kuuriyada Koonfureed waxay rabtaa Mashruuca Istanbul
Bridge South Korea 1915 Çanakkale ka dib mashruuca 'Crazy project' oo sidoo kale loo yaqaan Channel Channel sidoo kale wuxuu rajeeyay. Mashruuca Channel Istanbul, oo loo qorsheeyay in la qabto mustaqbalka dhow, waxaa qabanaya Madaxweyne Tayyip Erdoğan. [More ...]
4 qarax miino oo ka dhacay dhismo tareen oo ku yaala Koonfurta Kuuriya
4 wuxuu ku dhintay dhismaha dhulka hoostiisa ee South Korea: Qarax ayaa ka dhacay dhismaha tareenka dhulka hoostiisa ee u dhow Seoul, oo ah caasimada South Korea. 4 qof ayaa la dilay iyo 10 dad ayaa dhaawacmay. Dabka iyo Musiibada Guud ee Gobolka Gyeonggi [More ...]
Tareenkii ugu horreeyay ee tareennada magnetic magnetic magaceeda laga soo diro ee Kuuriyada Woqooyi waxay u shaqo tagtay: Tareenkii ugu horreeyay ee tareennada magnetic magnetic magnetic magnetic ee magaceeda la soo gaabiyo 2006 wuxuu bilaabay inuu bilaabo inta udhaxeysa garoonka diyaaradaha ee Incheon iyo Saldhigga Yongyu shalay. "Kuuriya Kuuriya" [More ...]
South Korea waxay tagi doontaa Tareenka Xawaaraha Sare ee dhinaca Dhinaceeda ee 2025
Kuuriyada Koofurta waxay tagi doontaa guud ahaan dalka 2025 by Tareenka Xawaaraha Sare: Kuuriyada koonfureed waxay ku dhawaaqday inay cusbooneysiin doonto wadooyinkeeda tareenka ee 2025 si ay u gaarto gees walba oo dalka ah laba saacadood gudahood. Waxaa qoray Wasaaradda Gaadiidka [More ...]
Sinarka Dhabarka ah ee Beelaha Dhexe oo lagu daray Seoul, South Korea
Khadka Sin ee 'Bund Bund Line' ee Seoul, Caasimadda Kuuriyada Koofureed waa la kordhiyey: Kordhinta 12,8 km ee khadka loo yaqaan 'Sin Bundang Line' ee magaalada Seoul, ee Caasimadda Kuuriyada Koofureed, waxay bilaabatay bishii Janaayo. Markaa, sidii adeeg waddaniyadeed [More ...]
Hay'adaha Koonfur Kuuriya ayaa booqdey Olympos Teleferik
Booqashada Hay'adaha Korean South Olympos Cable Car: Mercury Korean Airlines iyo wakiilada hay'adda Turkiga u yimid iyadoo la kaashanayo Antalya Tour laga helay baaritaanka Turkiga la yimid Turkish Airlines iyo iskaashiga Mercury Tour [More ...]